Hanaraka ny ladoany? : mandrahona hitokona koa ny fananan-tany raha…. | NewsMada
Hanaraka ny ladoany? : mandrahona hitokona koa ny fananan-tany raha….
Par Taratra sur 07/07/2017
Milaza koa ny mpiasan’ny fananan-tany fa 15 taona tsy nandray ny tambin-karamany. Hitokona koa izy ireo raha tsy azony ny tombontsoany, hanaraka ny mpiasan’ny ladoany.
Fitakian-jo! Maneho hevitra koa ny mpikambana ao anatin’ny Sendikan’ny inspektera sy ny mpanara-maso ary ny mpanampy ao amin’ny sampandraharahan’ny fananan-tany. Ambaran’izy ireo fa mitovy zo amin’ny sampandraharahan’ny fadin-tseranana koa ny ao amin’ny fananan-tany satria samy mampidi-bola ho an’ny fanjakana. Voalaza ao anatin’ny andininy fahatelo ao amin’ny Lalàna fehizoro voarakitry ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana (LOLF), fa misitraka zo sy tombontsoa ireo mpiasa mampidi-bolam-panjakana. Milaza anefa ireo mpikambana ao anatin’ny Sendikan’ny fananan-tany fa 15 taona tsy nandray ny anjarany izy ireo, ka mitaky izany.
Tsy handoa karama
Tsy hiditra amin’ny fitokonana avy hatrany ireo mpiasan’ny fananan-tany, fa hiditra amin’ny fifampidinihana amin’ny fanjakana, indrindra ny minisiteran’ny Tetibola. Misy koa ny dingana mifanaraka amin’ny lalàna mifehy ny asa sy ny fitokonana. Raha tsy misy kosa ny vahaolana mahafa-po, azo antoka fa hanaraka ny ao amin’ny ladoany koa ny ao amin’ny fananan-tany.
Marihina fa tsy mbola mivaha ny disadisa eo amin’ny Sendikan’ny ladoany (Sempidou) sy ny fanjakana, ary mandeha ny feo fa mety ho tonga any amin’ny fampiatoana ny fandoavan-karaman’ny mpiasan’ny ladoany mitokona ny fanjakana. Fehiny, tsy maty ny afo, ary mety hiitatra any amin’ny fananan-tany indray.